Ukufika kweempazamo zePhepha lokuHamba ekufuneka uziphephe Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 16, 2015 NgoLwesibini, Juni 30, 2015 Douglas Karr
Uya kumangaliswa zizinto ezininzi eziphazamisa umntu kwiphepha abafike kulo. Amaqhosha, ukuhambahamba, imifanekiso, amanqaku ebhulethi, amagama abhalwe ngesandla… zonke zithatha ingqalelo yotyelelo. Ngelixa iluncedo xa usenza ukuba iphepha liphucule kwaye ngabom ubeka ezo zinto ukuze zilandelwe lundwendwe, ukongeza into engeyiyo okanye izinto ezingaphandle zinokuthatha undwendwe kude nefowuni yokwenza into ukuba bacofe kuyo kwaye uguqule uvule.
I-Copyblogger ikhuphe le infographic emnandi eyenza ukufanisa phakathi kwendwendwe kwindawo yakho kunye nomntu olandela umkhombandlela, Ukuhamba kwamaphepha Goofs enza ukuba ulahlekelwe lishishini. Ndiwuthanda kakhulu lo mzekeliso kuba ulunge kakhulu njengoko ucinga ngohambo oluthathayo.
Into yokuqala esiyenzayo kuhambo yimephu yemvelaphi kunye nendawo esiya kuyo, emva koko sinike eyona ndlela isebenzayo phakathi. Xa u ukwenza imephu kwiphepha lakho lokufikaNdiyathemba ukuba wenza kwa into enye - ucinga ukuba zivela phi iindwendwe zakho kwaye ungashiyi mbuzo wokuba yeyiphi indawo ekuyiwa kuyo Apha zi 9 iimpazamo eziqhelekileyo unokwenza xa usenza iphepha lokufika (kodwa kufuneka uphephe):
Khange uchaze Izibonelelo zokuguqula.
Khange ubonelele nge Indlela elula yokuguqula.
Khange ubonise ngokucacileyo Indawo enye okanye isiphumo.
Khange uyenze Nxibelelana ngolwazi oluphambili ngokufanelekileyo.
Khange uyenze susa umxholo ongafunekiyo.
Usebenzise kakhulu ijargon kunye namagama anzima.
Khange ukuxhase umxholo wakho ngedatha, iinkcukacha kunye nobungqina kubo ukuphucula ukuthembeka kwakho.
Khange uyenze susa ukhetho lwangaphandle njengokukhangela kunye namakhonkco ongezelelweyo.
Khange uqiniseke ngephepha lakho lokufika zilayishwe ngokukhawuleza!
tags: isigama esinzimaIzibonelelo zokuguqulaikopi yeebloggerkuyoijargonulwazi oluphambiliuyilo lwephepha lokufikaiphepha lokuhambaiphepha lokufika infographiciimpazamo zephepha lokufikaUkulungiswa kwephepha lokufikaindlela eya kuguqukoumxholo oxhasayoUbungqinaUmxholo omninzi